किन हुन्छ टन्सिल ? थाहा पाउनुहोस् लक्षण र बच्ने उपाय ,टन्सिल हुदाँ के बार्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
किन हुन्छ टन्सिल ? थाहा पाउनुहोस् लक्षण र बच्ने उपाय ,टन्सिल हुदाँ के बार्ने ?
गलाको दुवैतर्फ मासुमा गाँठो बन्दै जानुलाई टन्सिल भनिन्छ ।
आजकल धेरै मानिसमा गलामा टन्सिलको समस्या देखा पर्ने गरेको छ । टन्सिल हुँदा गला सुन्निने, बेस्सरी दुख्ने, बोल्न समस्या हुने लगायतको समस्या देखापर्दछ । यो चिसो, संक्रमण, ब्याक्टेरिया, गलत खानपान र मौसम परिवर्तनका कारण हुने गर्दछ ।
शरीरमा उच्च तापक्रम देखापर्नु ,सुक्खा खकार आउनु ,जिउ काँप्ने गरी ज्वरो आउनु ,स्वास गन्हाउनु ,गला भित्रको भाग रातो हुनु ,आवाज भारी हुनु रखाना निल्न गाह्रो हुनु ।
टन्सिल हुनुका कारण१. शरीरमा आयोडिनको कमी हुनु ।२. मौसम परिवर्तन भएर चिसो हुनु ।३. अत्यधिक चिसो खानेकुरा खानु ।४. बजारका तथा गलत खानपानको बानि हुनु ।५. संक्रमण वा ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुनु ।६. अत्यधिक मात्रामा धूलोधूवाँ हिड्नु वा काम गर्नु ।७. अमिलो खानेकुराको सेवन गर्नु ।
१. मरिच र तुलसीका पातलाई उमालेर काढा बनाई राति सुत्नुअघि दूधमा हालेर पिउँदा पनि टन्सिल बिस्तारै निको हुन्छ ।२. दालचिनीको धूलो र महको मिश्रणलाई नियमित ३ पटकसम्म खाएमा पनि गलाको टन्सिल निको हुन्छ ।३. बेसार, बीरेनून र मरिच पानीमा हालेर उमाल्नुस् । त्यसपछि त्यो पानीले दिनमा दुईचोटि गला सफा गर्नुस् ।४. ल्वाङ, अलैंची र दालचिनीलाई ग्रीन टीमा हालेर पिउँदा गलामा जमेको ब्याक्टेरिया बिस्तारै मर्छ र टन्सिल निको हुन्छ ।५. अदुवा र मह हालेको चिया पिएमा पनि टन्सिल निको हुन्छ ।
टन्सिल हुदाँ के बार्ने ?
अमिलो, पीरो र चिसो नखाने ,खानामा तेल मसला कम प्रयोग गर्ने भुइँकटहर, केरा, सुन्तला नखाने ,आरुबखडा, खरबुजा, मेवा र स्याउ पनि नखाने ,खानापछि नियमित तुलसीको पात चबाउने